Home SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA Mpilalao Football Arzantina Roberto Pereyra Tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny sariitatry ny baolina kitra miaraka amin'ny anaram-bosotra hoe "El Tucumano". Ny tantaram-pianakavian'i Roberto Pereyra momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-mitranga mahatalanjona avy amin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fanombohana tsara ny fizarana 2018 / 2019 Premier League. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mahalala betsaka momba ny Bio Bioéryra izay tena mahavariana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Roberto Pereyra Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-Fiainana tany am-piandohana sy tamina fianakaviana
Manomboka eo, ny anarany feno dia Roberto Maximiliano Pereyra. Roberto Pereyra dia teraka tamin'ny 7 Janoary 1991 tamin'ny reniny Rosa Toledo sy ny rainy Leonides Pereyra tao San Miguel de Tucuman.
Ny fanambadiana eo amin'ny ray aman-dreniny; Leonides Pereyra sy Rosa Toledo dia tsiky sy fahasambarana.
Ny ray aman-drenin'i Roberto Pereyra dia Kristianina avy amin'ny vala katolika Romanina. Talohan'ny nahatongavan'i Pereyra, dia niasa tao amin'ny orinasa fanamboarana jiro ny rainy. Tamin'izany fotoana izany, dia tsy maintsy niasa mafy i Leónides mba hanome izay tokony hohanin'ny fianakaviany amin'ny karama isan'andro izay azony.
Pereyra, tsy toy ny ankamaroan'ny mpilalao avy amin'ny fianakaviana manankarena (Gerard Piqué, Andrea Pirlo, Hugo Lloris Mario Götze etc) dia nanana fotoana sarotra nandritra ny fiainany teo aloha. Izy dia nihalehibe tao amin'ny fidarabian'i Tucuman niaraka tamin'ireo rahalahiny roa sy rahavavy iray.
Tamin'izany fotoana izany, ny tanànany dia fantatra hatrany amin'ny natiora feno habibiana satria tany amin'ny faritra avaratra-andrefan'i Arzantina izy io. Pereyra sy ny ray aman-dreniny indray mipetraka ao amin'ny trano hazo izay tsy nampihetsi-po raha tsy nifindra trano izy ireo. Ireo dia nihira toy ny fanavaozana mandra-pahitan'izy ireo fa ny trano fonenany vaovao dia mitovy amin'ny haben'ny sazy sazy. Ny fahitana ny zava-tsarotra dia nitarika an'i Pereyra hikarakara ny filany avy hatrany mba hividy sy hanao asa tsy misy dikany. Araka ny heviny;
"Tsy nanana na inona na inona izahay. Nivarotra varimbazaha varahina sy voankazo aho indraindray mba hahafahako mividy sandwich. Mpamboly zaridaina koa aho. Tsy natahotra ny ho faty izahay fa ny dadanay dia afaka manome ny fepetra faran'izay kely indrindra, noho izany dia voatery nivarotra zavatra ho an'ny fidiram-bola fanampiny aho. "
Roberto Pereyra Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-Asa fanorenana
Na dia manana fanombohana tsy misy dikany aza izy, dia tsy manakana azy tsy hampandroso amin'ny zavatra tiany ao am-pony izany baolina kitra. Rehefa nanomboka nilalao baolina kitra i Pereyra, dia tsy nanana trano izy. Na dia nahazo baoty ihany tamin'ny farany aza izy dia mbola nanohy nampiasa ny tsy fisian-dry zareo nilalao, ary nitazona ny akanjo ho an'ny fotoana manokana ho an'ny baolina kitra.
Nandritra ny ady rehetra dia nanomboka nilalao ho an'ny tanora iray i Pereyra nandalo an'i UTA izay Arzantina. Tamin'ny 15, nilalao tao Necochea izy, izay tao atsimon'i Buenos Aires. Noho ny zotom-pandrefesana hita ao aminy, dia miahy azy ny River Plate. Tao amin'ny club Pereyra dia nahita ny anjara toerany ho toy ny mpilalao midiademy sy mpilalao tsotra.
Rehefa fantany fa avy amin'ny fiandohan'ny fanetren-tena izy, dia niezaka i Pereyra mba hanatsara ny tenany mba hivarotra ho an'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny. Tany amin'ny Riverplate no nifarana ny asany tamin'ny fahatanorany ary nanomboka nanao fahagagana lehibe teo amin'ny sehatry ny klioba izay nanome azy ny tapakila ho any Eorôpa. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Roberto Pereyra Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-Relationship Life
Ao ambadiky ny lehilahy rehetra dia misy vehivavy. Amin'ity indray mitoraka ity, ho an'ny mpilalao baolina kitra voalohany voalohany indrindra, dia misy karazam-boninahitra malaza hita ao amin'ny olona mahafinaritra an'i Maria Carolina, sary etsy ambany miaraka amin'ny fitiavana ny fiainany.
Pereya dia manambady an'i Maria ary samy manana zanaka lahy antsoina hoe Maxi Jr Pereyra izay teraka tamin'ny Oktobra 2015.
Niainga tamin'ny fotoana nahaterahan'ny zanak'i Roberto Pereyra, ny roa tiana dia tsy maintsy ho nihaona nandritra ny fotoany tao amin'ny River Plate, fotoana iray tsy nahatonga azy ho lehibe.
Roberto Pereyra Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-Ray zanaka mifandray
Na iza na iza dia afaka ny ho ray, fa mila lehilahy tena izy tahaka an'i Roberto ny toeran'ny reny ho an'ny zanany.
Ho an'i Roberto, dia tsy ny hamenany tanjona fotsiny akory fa ny fisakaizana eo amin'ny tenany sy ny zanany. Ny toetra toy izany misy ray lehibe dia hita eto ambany.
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, i Maxi Jr Pereyra dia efa nanaraka ny dian'ny dadany. Samy tia mandany andro (ao an-trano sy any an-tokotany) izy ireo, milalao baolina kitra.
Roberto Pereyra Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny ray aman-dreniny dia fitaomam-panahy avy any aminy izay manana fitiavana tsy misy fepetra amin'ny fianakaviany. Raha raisina avy amin'ny sary eto ambany, Roberto Pereyra tena mahatakatra ny foto-kevitra momba ny fananganana "Alaharo ny ray aman-dreny"Filozofia.
Roberto Pereyra dia namerina ny ray aman-dreniny noho ny fitiavana, ny fiahiana, ny fiheverana azony hatramin'ny nahaterahany, ary ny tena nanohana azy nandritra ny asany.
Ny zavatra tsara indrindra eto amin'ity izao tontolo izao ity dia ny mahita ny rainy, ny mamany, ny rahalahy sy ny anabavy rehetra faly ary fantany fa izy no antony mahatonga izany fahasambarana izany. Ny ankamaroan'ny karamany dia mankany amin'ny fianakaviany.
Roberto Pereyra Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram- Tatitra manokana
Amin'ny marika manokana, i Pereyra dia tompon'andraikitra, nofaizina ary manana fifehezan-tena. Tiany ny fianakaviany sy ny fomba amam-panao Arzantina.
Pereyra dia manana ny fahaleovan-tena anatiny izay ahafahany mandroso fandrosoana lehibe eo amin'ny fiainany manokana sy matihanina.
Be fitiavana amin'ny mpankafy rehetra: Pereyra dia fantatra fa tena mpinamana amin'ireo mpanohana azy, na dia ireo manana fahasembanana aza. Misy ohatra aseho etsy ambany.
Momba ny anarany: Roberto Pereyra dia nahazo ny anarany "El Tucumano"Nandritra ny fotoanany tao amin'ny River Plate. Manondro anarana iray avy amin'ny faritra Tucumano izany. Tucumán dia faritany kely any avaratra andrefan'i Arzantina. Noho ny fitiavan'i Roberto ny fanabeazana azy sy ny vahoakany avy any Tucuman, nanapa-kevitra ny hanohy hitondra ny anarana izy. Izany no nahatonga azy hanamboatra ny lambany indrindra indrindra ny baoty mba ahitana ny teny hoe TUCU.
Momba ny Finoany: Araka ny efa nambarany tany am-piandohan'ny fiainany, ny finoana Roberto Pereyra dia avy amin'ny finoana katôlika kristiana. Manaiky tanteraka ny fahazarana katôlika izy.
Momba ny fankalazana ny baolina kitra: Ny fiandohan'ny 2018 / 2019 Anglisy Premier dia nanatri-maso ity fankalazana ny fankalazana io tamin'ny Roberto izay nantsoiny hoe "Oro para celebrar" izay midika my tanjona lehibe toy ny Gold mba hankalaza.
Fantatrao ve??... Ireo tompon'ny Watford, ny fianakaviana Pozzo dia mahalala tsara an'i Roberto Pereyra ary manana fifandraisana manokana aminy.
Roberto Pereyra Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-Traikefa amin'ny asa
Tamin'ny 16 December 2016, i Pereyra dia naratra mafy teo amin'ny tongony havia izay nihatra tamin'ilay meniscus-cartilage (Ny taolana dia mitebiteby). Ny ratra dia nahatonga azy hijanona ivelan'ny baolina ho an'ny 8 volana izay nahatonga azy ho natahotra ny asany. Nolazainy izany taorian'ny nahasitrana;
"Fotoana tena sarotra tokoa izany,"
"Mahasosotra raha te-hiverina fotsiny ianao. Miteny anareo enim-bolana izy ireo ary afaka mahatsapa ianareo isan'andro isaky ny enim-bolana. Manala anao ara-tsaina izany, saingy amin'ny fanoloran-tena, ny hery, ny tanjaka ary ny fanohanana avy amin'ny havana aman-tsakaiza, dia tonga any amin'ny faran'ny tonelina ianao. Azonao atao ny mandray azy io. Misaotra an'ireo rehetra nanohana ahy nandritra ny fotoana sarotra aho. "
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Roberto Pereya momba ny tantaram-pianakaviana tantanin'ny tantaram-pitiavana. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihana anao na manontania anay!